Ivotoerana fitantanana fizahan-tany sy krizy manerantany ao Jamaika sy Kenya Sign MOU
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ivotoerana fitantanana fizahan-tany sy krizy manerantany ao Jamaika sy Kenya Sign MOU
Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Kenya Breaking News • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett (mipetraka) dia sary taorian'ny fitsidihana nataon'ny Oniversite Kenyatta sy ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC) - Afrika Atsinanana, any Nairobi, Kenya omaly (15 Jolay). Ny orinasa dia ivon'ny zanabolana an'ny GTRCMC monina any Jamaika, izay miorina ao amin'ny University of the West Indies, Mona. Mizara amin'izao fotoana izao dia ny Chancellor lefitra (LR) ao amin'ny Oniversite Kenyatta, Profesora Paul Wainaina; Dr. Esther Munyiri, Tale, GTRCMC- Afrika Atsinanana; Andriamatoa Joseph Boinnet, sekretera lehiben'ny fitantanana, ministeran'ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Kenya; Ramatoa Anna-Kay Newell, talen'ny fifandraisana iraisam-pirenena, GTRCMC - Jamaica sy Andriamatoa Robert Kamiti, Lehiben'ny mpiandraikitra fizahan-tany, Ministeran'ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Kenya. Ny minisitra Bartlett dia any Kenya amin'izao fotoana izao handray anjara amin'ny fihaonana an-tampony andrasana indrindra ho an'ny minisitry ny fizahantany afrikanina izay hatao any Nairobi, anio. Ny minisitra Bartlett dia nasaina hiteny an-tampon'ny tampony amin'ny maha-mpitarika eritreritra manerantany azy momba ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fanarenana.
Minisitry ny fizahantany any Jamaika sy ny filoha mpiara-mitantana ny ivontoerana fitantanana fizahan-tany sy fizahana krizy (GTRCMC), Hon. Edmund Bartlett, ary ny sekreteran'ny kabinetra any Kenya, ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fiainana dia, ary ny filohan'ny GTRCMC - Afrika Atsinanana, Hon. Najib Balala androany (16 Jolay) dia nanao sonia taratasy fifanarahana (MOU) izay hanokatra ny làlana hiarahan'ny Ivon-toerana roa hamolavola politika ary hanao fikarohana mifandraika amin'ny fahavononan'ny toerana, fitantanana sy fanarenana.
Ny minisitra Bartlett dia nidera ny fanaovan-tsonia MOU, ho toy ny “dingana lehibe ho an'ny fikarohana politika.”
Io dia hahafahan'ireto ivon-toerana roa ireto hiara-miasa amin'ny faminavinana, ny fanalefahana ary ny fitantanana ny risika mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany ateraky ny anton-javatra manakorontana isan-karazany.
Izany dia mifandraika manokana rehefa mivezivezy sy mamaly ireo fanamby ateraky ny areti-mandringana COVID-19 mitohy.
Ny sonia dia natao nandritra ny fihaonamben'ny fizahantany ho an'ny minisitry ny fizahantany afrikanina izay natao tao Nairobi, Kenya, izay nanasana ny minisitra Bartlett hiteny amin'ny fahaizany ho mpitarika eritreritra erantany momba ny faharetan'ny fizahan-tany sy ny fahasitranana.
Ny Minisitra Bartlett dia nidera ny fanaovan-tsonia MOU, ho toy ny “dingana lehibe ho an'ny fikarohana politika. Hahafahan'ireto Ivotoerana roa ireto hiara-miasa amin'ny faminavinana, ny fanalefahana ary ny fitantanana ny risika mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany ateraky ny anton-javatra manakorontana samihafa. Fotoana tena mahaliana tokoa ity. ” Ny GTRCMC - Afrika Atsinanana ao amin'ny Oniversite Kenyatta, dia ivontoerana zanabolana isam-paritry ny GTRCMC iraisam-pirenena, izay hita ao amin'ny University of the West Indies (UWI), Jamaika.
“Misy ifandraisany manokana io rehefa mivezivezy sy mamaly ireo fanamby ateraky ny areti-mandringana COVID-19 manerantany. Tokony ho lohalaharana amin'ny fandrindrana ny valiny, ny fanaraha-maso ary ny fanaraha-maso isika, ary ny fandaminana ny ezaka fanampiana ara-toekarena ao anaty sy manerana ny sisintany. Ny fiaraha-miasa toy izao dia sady manakiana no ara-potoana ”, hoy ny minisitra.
Minisitry ny fizahan-tany sy ny mpiara-mitantana ny ivontoerana fitantanana fizahan-tany sy krizy manerantany (GTRCMC) - Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (2 ankavanana), ary ny sekreteran'ny kabinetra any Kenya, ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fiainana dia, ary ny talen'ny GTRCMC - Afrika Atsinanana, Hon. Najib Balala (faha-2 havia), mampiseho ireo MOU nosoniavina androany 16 jolay teo anelanelan'ny Ivotoerana roa. Mijery ireo lefitra lefitry ny oniversite Kenyatta, ny profesora Paul Wainaina (ankavia) ary Ramatoa Anna-Kay Newell, talen'ny fifandraisana iraisam-pirenena, GTRCMC - Jamaika. Ny GTRCMC - Afrika Atsinanana ao amin'ny Oniversite Kenyatta, Nairobi, Kenya, no ivon'ny zanabolana an'ny GTRCMC miorina amin'ny Jamaikana, hita ao amin'ny University of the West Indies, Mona. Ny fanaovana sonia MOU dia natao nandritra ny Vovonana Afrikanina momba ny fanarenana fizahan-tany any Nairobi, Kenya ankehitriny. Ny minisitra Bartlett dia nasaina hiteny an-tampon'ny fihaonana an-tampony amin'ny maha-mpitarika eritreritra manerantany azy momba ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fanarenana.
Taorian'ny fanaovan-tsonia MOU, Hon. Najib Balala dia nanolotra fanamarinana momba ny vola mitentina Ksh 10 tapitrisa (100,000 XNUMX dolara amerikana) ho an'ny minisitra Bartlett hanohanana ireo hetsi-panoherana ao amin'ny Afrikana Atsinanana Afovoany.
Hanampy ny fiaraha-miasa stratejika ny MOU satria mifandraika amin'ny Fikarohana sy Fampandrosoana; Fanentanana momba ny politika sy ny fitantanana fifandraisana; Fandaharana / Famolavolana tetikasa sy fitantanana ary fanofanana ary fananganana fahaiza-manao, manokana amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fitantanana ny loza voajanahary; fitantanana fiarovana sy fiarovana amin'ny cyber; fitantanana mpandraharaha; ary ny fitantanana ny areti-mandringana sy ny valanaretina.
Ny sekreteran'ny kabinetra any Kenya, ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fiainana dia, ary ny talen'ny ivontoerana fitantanana fizahan-tany sy fizahana krizy (GTRCMC) - Afrika Atsinanana, Hon. Najib Balala (faha-2 havia), dia manome fizarana vola mitentina Ksh 10 tapitrisa (100,000 2 $ US) ho an'ny minisitry ny fizahantany sy ny filoha mpiara-mitantana ny GTRCMC - Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (ankavanana faha-16) hanohanana ireo hetsika atao ao amin'ny Afrikana Atsinanana Afovoany. Ny fampisehoana dia natao taorian'ny fanaovan-tsonia ny MOU teo anelanelan'ny Ivotoerana roa androany maraina (XNUMX Jolay). Nandray anjara tamin'io hetsika io ihany koa ny lefitry ny lefitry ny oniversite Kenyatta, ny profesora Paul Wainaina (ankavia) ary Ramatoa Anna-Kay Newell, talen'ny fifandraisana iraisam-pirenena, GTRCMC - Jamaika. Ny GTRCMC - Afrika Atsinanana ao amin'ny Oniversite Kenyatta, Nairobi, Kenya, no ivon'ny zanabolana an'ny GTRCMC miorina amin'ny Jamaikana, hita ao amin'ny University of the West Indies, Mona. Ny fanaovana sonia MOU dia natao nandritra ny Vovonana Famerenana ny fizahan-tany ho an'ny minisitry ny fizahantany afrikanina ao Nairobi. Ny minisitra Bartlett dia nasaina hiteny an-tampon'ny tampony amin'ny maha-mpitarika eritreritra manerantany azy momba ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fanarenana.
Hatao amin'ny alàlan'ny programa na fiaraha-miasa toy ny: